Tilmaamaha Ilaalinta Jiilaalka ee AHU Gariiradda
Biyaha waxaa loo isticmaalay in lagu qaboojiyo laguna kululeeyo hawo isku duubniinka kuleylka tuubada finned ilaa bilowgii kuleylka iyo qaboojinta. Qaboojinta dareeraha iyo waxyeelada gariiradda ee natiijada ayaa sidoo kale soo jiray isla muddadaas. Waa dhibaato nidaamsan oo marar badan laga hortagi karo.
Maqaalkan, waxaan ku taxnay dhowr talooyin oo kaa caawinaya inaad ka hortagto barafka dillaacsan ee qaboobaha
1. Haddii cutubku uusan shaqeynaynin xilliga qaboobaha, dhammaan biyaha nidaamka waa in la siidaayaa si looga hortago dildilaaca gariiradda.
2. Xaaladaha deg-degga ah sida koronto la'aanta ama dayactirka korantada, hawo-qaboojiyaha waa inuu isla markaaba xirnaadaa si loo hubiyo in hawo banaanka ka imaanin nidaamka. Dheecaanka laguma dhex tuurayo gariiradda oo hoos u dhaca kulaylka gudaha AHU wuxuu sababi karaa samaysanka barafka. Heerkulka gudaha AHU waa inuu ka sarreeyaa 5 ℃.
3. Nadiifinta gariiradda iyo miiraha biyaha si joogto ah. Waxyaabaha ku xayiran dhuunta oo keenaya wareegga biyaha oo liita. Dabin dareere ah oo ku jira tuubada gariiradda oo keenta dhaawaca gariiradda markii xaaladda qabowgu jiro.
4. Naqshadaynta nidaamka xakamaynta aan habboonayn. Nidaamyada kontoroolka qaarkood waxay kaliya hagaajinayaan furitaanka waalka biyuhu ma aha xawaaraha marawaxadaha iyadoo lagu saleynayo xakamaynta heerkulka gudaha. Maarayn la'aanta marawaxadda oo keenta wareegga biyaha oo daciifa iyo mugga hawada sare, taasoo keenaysa biyo qabow oo isku duuban. (Heerka xawaaraha biyaha ee gariiradda waa in lagu xakameeyo 0.6 ～ 1.6m / s)
Wareegga wareegga ee meesha cadaadisku ka dhismo, iyo barta ugu daciifsan ee wareeggaas. Tijaabinta ballaaran ayaa muujisay in cillad-darradu u muuqan doonto sidii aag murugeysan oo ku jira madaxa tuubbada ama foorarsiga oo ballaadhay. Xaaladaha badankood, waa aagga dillaaci doona.
Fadlan eeg hoosta xisaabinta cadaadiska sababtoo ah gariiradda qabow.
= Kordhinta Mugga (Xaaladda: 1 cadaadiska Hawada, 0 ℃, mugga 1 kg oo biyo ah)
ε = 1 ÷ 0.9167 ＝ 1.0909 (Korodhka 9%)
E = modulus ee dabacsanaanta kacsanaanta (Ice = 2800 Kg / cm2)
Cadaadis daran waa sababta keenta qaboojinta waxyeellada gariiradda. Waxyeellada gariiradda oo ay sabab u tahay qaboojiyaha xariiqda dareeraha waxay la xiriirtaa cadaadiska ba'an ee la soo saaray inta lagu guda jiray samaynta barafka. Aagga ay ka kooban tahay barafkani wuxuu xamili karaa oo keliya cadaadiskan lagu daray illaa uu ka gaarayo xadka keena dhaawaca ku-beddelaha kuleylka iyo guuldarada xigta.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan ilaalinta maareynta hawada xilliga qaboobaha, la xiriir maanta Airwoods! Waxaan hogaamineynaa bixiyaha caalamiga ah ee wax soo saarka HVAC iyo dhisida xalka tayada hawada suuqyada ganacsiga iyo warshadaha. Balanteenu waa inaan siino macaamiisheenna alaabada iyo adeegyada ugu fiican qiimo jaban lana abuuro jawi nololeed wanaagsan.
Laga soo bilaabo 2007, Airwoods waxay u heellan tahay inay bixiso hvac dhameystiran, qol nadiif ah iyo xalalka daaweynta VOC ee warshadaha kala duwan. Waxaan higsaneynaa inaan adduunka u gaarsiino tayada hawada wanaagsan ee dhismaha leh alaab wax ku ool u ah tamarta, xalalka la hagaajiyay, qiimaha qiimaha ku habboon iyo adeegyada waaweyn.
Room 2101, Xarunta Dhexe Dhismaha No.25, Tian An Hi-Tech Ecological Park, Maya 555 Panyu Ave, Degmada Panyu, Guangzhou, Shiinaha